Makhaayadaha Moscow iyo baararka hadda waxay u baahan yihiin caddeyn tallaalka COVID-19 | Wararka safarka Ruushka
Bogga ugu weyn » Wararka Booqashada Caalamiga ah » Wararka safarka Ruushka » Makhaayadaha Moscow iyo baararka hadda waxay u baahan yihiin caddeyn tallaalka COVID-19
Makhaayadaha Moscow iyo baararka hadda waxay u baahan yihiin caddeyn tallaalka COVID-19
Kaliya kuwa haysta caddeynta tallaalka, caddeyn ah in ay qaateen coronavirus lixdii bilood ee la soo dhaafay, ama baaritaanka PCR-ga ee aan fiicnayn saddexdii maalmood ee la soo dhaafay ayaa la siin doonaa shahaadada dhijitaalka ah.
Dadka magaalada deggan hadda waxaa looga baahan yahay inay iskaan lambar QR ah kahor intaysan galin goobaha martigelinta.
Laga bilaabo Juun 28, nidaamku wuxuu noqonayaa “mid qasab ku ah dhammaan maqaayadaha iyo makhaayadaha doonaya inay usii shaqeeyaan sidii caadiga ahayd.”
Kuwa qaatay hal tallaal oo keliya oo tallaalka ka mid ah ayaa la soo sheegayaa inay sidoo kale u qalmi doonaan qorshaha.
Xannibaado cusub oo COVID-19 ah ayaa looga dhawaaqay magaalada caasimada ah ee Russia kuwa aan wali qaadan talaalka coronavirus ama uu ku dhacay viruska.
Moscow Duqa Magaalada Sergey Sobyanin ayaa maanta ku dhawaaqay sharci cusub oo ka dhan ah COVID kaas oo u baahan doona dadka degan magaalada inay iskaan dhigaan nambarka QR ka hor inta aysan soo galin goobaha martigelinta oo ay ku jiraan cunnooyinka, maxkamadaha cuntada, baararka iyo meelaha kale ee bulshada.
Kaliya kuwa haysta caddeynta tallaalka, caddeyn ah in ay qaadeen coronavirus lixdii bilood ee la soo dhaafay, ama baaritaanka PCR-ga ee aan fiicnayn saddexdii maalmood ee la soo dhaafay ayaa la siin doonaa shahaadada dhijitaalka ah. Kuwa qaatay hal tallaal oo keliya oo tallaalka ka mid ah ayaa la soo sheegayaa inay sidoo kale u qalmi doonaan qorshaha.
"Xaaladda fiditaanka Covid ayaa wali ah mid aad u adag," ayuu yiri duqa magaalada. “Waxaa jira in ka badan 14,000 oo dad aad u jiran oo ku jira isbitaalada. Nidaamka daryeelka caafimaadku si buuxda ayaa loo abaabulay. ”
Laga bilaabo Juun 28, nidaamku wuxuu noqonayaa “mid qasab ku ah dhammaan maqaayadaha iyo makhaayadaha doonaya inay usii shaqeeyaan sidii caadiga ahayd.” Cunto qaadashada iyo keenista ayaa noqon doonta ikhtiyaarka kaliya ee ay heli karaan kuwa aan lahayn lambarka QR. Laba milyan oo qof oo ku nool magaalada ugu weyn Yurub ayaa lagu soo warramayaa inay horeyba u heleen qaadashadoodii ugu horreysay.
Magaalada ayaa horeyba si wax ku ool ah uga mamnuucday cawayska, iyada oo laba toddobaad laga mamnuucay baararka iyo naadiyada u adeega macaamiisha 11-kii fiidnimo.
Isla mar ahaantaana, xeer hore oo mamnuucaya munaasabadaha tirada badan ayaa la adkeeyay, kana mamnuucaya goobaha inay ku yeeshaan in ka badan 500 macaamiisha goobta wakhti kasta.
Toddobaadkii la soo dhaafay, Moscow waxay noqotay magaaladii ugu horreysay adduunka ee tallaal ka dhigta mid waajib ka dhigta kuwa ku jira doorka dadweynaha ee wajahaya. Ganacsiyada warshadaha sida martigelinta, gaadiidka iyo madaddaalada waa inay caddeeyaan in 60% shaqaalahooda ay heleen tallaal haddii kale ay la kulmi doonaan ganaaxyo culus. Saraakiisha ayaa xaqiijiyay in shirkadaha ay shaqada ka joojin karaan mushaar la’aan si ay ula kulmaan qoondadooda. Xeerar la mid ah ayaa lagu soo rogay magaalada St. Petersburg iyo gobollada kale ee Ruushka.
Mar sii horeysay maanta, wakiilka xuquuqaha aadanaha ee Ruushka Tatiana Moskalkova ayaa tallaabadaas ku tilmaamtay "ciyaar aan daacad ahayn." Waxay tiri "farsamooyinka lagu fulinayo ayaa keenaya waallida ballaaran waxayna dadka ka cabsanayaan qasab."